China Face mask KS-9005 fekitori nevagadziri | Gubang
Kumeso mask KS-9005
Zvimedu zvakaita sezviya zvekukuya ,jecha,kutsvaira,kucheka,masaga,kana kugadzira zvicherwa,marasha,ironore,furawa,simbi,huni,mukume,nezvimwewo zvimwe zvinhu.Liquid kana isiri-oiri based particles kubva kuspray isingabudisewo mafuta aerosols kana mhute.
Iyo N95 mask ndeimwe yeapfumbamwe masiki ekudzivirira anosimbiswa neNIOSH. “N” zvinoreva kuti haidziviriri kumafuta. "95" zvinoreva kuti kana yakafumurwa kune yakatsanangurwa nhamba yeakakosha bvunzo masisitimu, iyo particle concentration mukati memask inodarika 95% yakaderera pane iyo particle concentration kunze kwemask. Kukosha kwe95% haisi yevhareji, asi zvishoma. N95 harisi chairo zita rechigadzirwa. Chero bedzi inosangana neN95 chiyero uye ichipfuura iyo NIOSH wongororo, inogona kunzi "N95 mask". Chiyero chekudzivirira cheN95 chinoreva kuti pasi pemamiriro ekuyedzwa anotsanangurwa muiyo NIOSH chiyero, kusefa kweiyo mask sefa zvinhu kune zvisiri-mafuta zvimedu (seguruva, acid mhute, mhute yependi, tupukanana, nezvimwewo) zvinosvika 95%.
Saizi: saizi yakazara
Raw zvinhu: black oxide
Ukobvu: 0.1 inches
Mucheka usina kuruka, donje remhepo inopisa, jira rakanyunguduka
Iyo 4th floor inobatsira kuramba kunyaradzwa kwedendere kweSMOG, guruva uye SPIT.
Yakagadzirwa nezvinhu zvakatipoteredza zvine hushamwari, hunyoro-huchapupu, husina chepfu, husingatsamwisi, hwakapfava uye hwakanaka.
Kambani yedu ine zvigadzirwa mu mainland China, ine zuva nezuva kubuda kwe500000. Yakapfuura certification dzakasiyana. Shamwari dzinofarira dzinogona kutibata
1. Inofema, isingapindi guruva, inopeta matatu, ichiita 360-degree matatu-dimensional nzvimbo yekufema.
2. Yakanyanya flat uye yakanyanyisa elastic earhook inogona kuderedza kudzvinyirira.
3. Nemhino yepurasitiki yakavanzika, anti-fog, inogadziriswa, kudzivisa mapeji uye kuderedza inhalation yezvinhu zvinokuvadza.
4.4 layer kuchengetedza.
Rutivi rwekunze runovharira zvimedu zvakakura. Iyo meltblown jira layer inodzivirira zvidimbu kubva pakunamatira. Chimiro layer
3D nzvimbo kuitira kuti pasave nekubatana pakati pemuromo wako uye mask.
Iyo yemukati yemukati yakagadzirwa nezvinhu zvakapfava inobata kumeso kwako kuti uwane ruzivo rwakagadzikana.
5.3D matatu-dimensional chimiro.
Iyo 3D chimiro inowedzera nzvimbo yekufema, inoita kuti iwe ufeme zvakanaka uye inoderedza gaka pakati pemaski nechiso. Uhu ukuru hwakakodzera kune akasiyana maumbirwo echiso. (Hazvina kukodzera vana)
6. Kusununguka kupfeka.
Yemhando yepamusoro elastic tambo dzenzeve dzinoita kuti zvive nyore kupfeka uye kugadzika kupfeka kwenguva yakareba. Iyo inogadziriswa hook-uye-loop tambo inokodzera zvakakwana kunyaradza kwemazuva ese.
Zvakapfuura: Kumeso kwemasiki KS-9008
Zvinotevera: 3 Ply Disposable Dziviriro Mask
Fp2 Kn95 Face Mask